Adeegga Dhameystirka Daaweynta Adeegga & Soo-saaraha | Processing Birta Hengli
Hawlaheena rinjiyeynta waxay ku saleysan yihiin shahaadada ISO 9001: 2015 Nidaamyada Maareynta Tayada. Waxaan bixinaa adeegga rinjiyeynta qoyan ee semi-otomaatigga ah ee ugu dambeeyay, oo ay ku jiraan xarun qotodheer oo kiimiko ah, qalabka qalalan, qolka casriga ah ee lagu buufiyo electrostatic iyo foornada warshadaha ee aadka u weyn. Caadi ahaan waxaan rinjiyeynnaa nooca soo socda: badeecadaha mashiinnada warshadaha, qaybaha mashiinnada beeraha, qaybaha mashiinnada dhismaha iyo kuwa kale.
Khabiiradeena rinjiyeynta qoyan waxay u soo bandhigi doonaan tayo, daboolida budada la awoodi karo ee loogu talagalay dhammaan baahiyahaaga dhameystirka birta! Aqoon isweydaarsiga rinjiyeynta ee 'Hengli' hadafkeenu waa inaan u fidino wada-hawlgalayaashayada adeeg tayo rinjiyeysan oo tayo sare leh, qoyan. Khabiirkeennu wuxuu ka soo bilaabmay siddeed iyo toban sano oo daahan ah noocyo kala duwan oo codsiyo badan ah. Intii lagu gudajiray waqtigan waxaan ururinay aqoon iyo waayo aragnimo ixtiraam leh oo laxiriira tikniyoolajiyadda rinjiyeynta qoyan ee casriga ah. Waxaan fahamsanahay in codsi kasta oo daahan gaar ah laga yaabo inuu keeno caqabado gaar ah. Khibraddan iyo aqoontani waxay awood noo siineysaa inaan siino macaamiil baahiyo badan oo kala duwan leh aadna u jilicsan, kharashna ku ool ah.
QC-gayagu wuxuu si taxaddar leh u kormeeraa inji kasta oo ka mid ah qaybahaaga kahor dhalmada. La soo qaaday, ama laguu keenay, qaybahaagu waxay imanayaan iyagoo diyaar u ah inay isticmaalaan iyadoon wax dhaawac ah gaarin!
Rinjiyeyaasha khibrada leh ee Hengli waxay dammaanad qaadayaan wax soo saar heer sare ah. Laga soo bilaabo diyaarinta dusha sare iyo sandblasting-ka guriga dhexdiisa ah si khibrad leh loo adeegsado, u adkaysi badan, jawi bey'adeed u leh, qurxinta qurxinta! Nidaamkayaga dubista ayaa xaqiijinaya inaanay jirin wax dhibco ah, dhibco ah ama sag ah oo ku jira dalabka hannaanka rinji qoynta.
Ka sokow, HDG, dahaadhka zinc, anodizing, awood-daboolida, Zinc-dahaarka, Chrome dahaarka leh, Nickel plated iwm, ayaa sidoo kale si xirfadaysan ay u siiyaan lamaanayaasheena. Kaas oo buuxin kara codsigaaga kala duwan.
Hore: Adeegga Goynta Plasma & Ololka
Xiga: Adeegga Laabista CNC